မူဆလင်ဘာသာဝင်ခေါ်တောကုလားတို့သည်ဗမာ၊ကရင်၊ရခိုင်၊မွန်၊ကချင်၊ကယားစသော မြန်မာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို ဝါးမျိုရန်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာကို ဝါးမျိုရန် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားအား ထုတ်လျက် ရှိကြပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားတို့ဟာ စိတ်ကောင်းရှိ၍ ၊ မိတ်ဆွေ တာဝန်ကျေပွန်တတ်ကြတယ် ။ လူချင်း နီးစပ်လာလျင် ဘယ်လူမျိုးကို မဆို ၊ ခင်မင်တတ်ကြ ၊ ယုံကြည်တတ်ကြတယ် ။ မူဆလင်တို့ဟာ ဤ အချက်ကို ၊ ချက်ကောင်းသိ၍ မြန်မာအမျိုးသမီးများကို ထိမ်းမြားကာ ၊ မူဆလင်ဘာသာဝင်များ ဖြစ်အောင် သိမ်းသွင်းနေကြပါတယ် ။
ရိုးရိုးသိမ်းသွင်း၍ မရလျှင် ငွေကြေးဖြင့် ပစ်ပေါက်၍ သိမ်းသွင်းကြတယ်။ တိုင်းရင်းသားတို့အား ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေရာမှာဖြစ်စေ သုံးရာမှာဖြစ်စေ အခြားလူမျိုးများနှင့် မတူပဲ စနစ်တကျမရှိဘဲ ပေါ့ပေါ့ တန်တန်သဘောထားကြတယ်။ သုံးလျှင်လည်းမသိ ကုန်လျှင်ကုန်မှန်မသိဘဲ နောက်ဆုံး ကုန်သွားသည့် အခါ ထိုဒုက္ခကို ရင်မဆိုင်ရဲကြသဖြင့် လူမျိုးနှင့်ဘာသာကို ဘေးချိတ်ပြီး ကြုံတက်ကြတယ်။ လူမျိုးနှင့်ဘာ သာကို ၀ါးမျိုမခံရအောင် ဤအချက်ကိုလည်း အထူးသတိပြူ စေချင်ပါတယ်။ သတိမပြုမိကြပါက ကုလား တို့ ထောင်ထားတဲ့ ထောင်ချောက်ထဲ မိသွားနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာတိုင်းရင်းသူတို့ကို ထိမ်းမြားရန်လွယ်ကူသဖြင့် မူဆလင်တို့က သူတို့၏ လျှို့ဝှက်လက် ကမ်းစာစောင်တွင် ‘ မြန်မာတိုင်းရင်းသူတို့ကို ပြည်တန်ဆာမနှင့် တူနေကြောင်း၊ လက်ထပ်ဖို့ လွယ်ကြောင်း ‘ ဖော်ညွှန်းရေးသားထားရာ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် ဘယ်လောက်ရင်နာစရာ ကောင်းသလဲ ဆိုတာ၊ မူဆလင် ခေါ်တောတွေ ဘယ်လောက် ယုတ်မာရိုင်းဆိုင်းလည်းဆိုတာ သိရှိလိုပါတယ်။ နောက်ပြီး မူဆလင် ကုလားတွေက အဆင့်အတန်း၊ ရာထူး အဆင့်အတန်း အလိုက် မြန်မာတိုင်းရင်းသူ တစ်ယောက်ယူနိုင်သူတိုင်းကိုလည်း ငွေကြေး ထောက်ပံ့ကာ ဘာသာနှင့် လူမျိုးမျိုနိုင်အောင် ကြိုးစား လျက်ရှိရာ ဘာသာရေးအခြေခံ နှင့် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်နည်းပါးပါက နောင်နှစ်ပေါင်းများ (၁၀၀) ကျော်တွင် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနှင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ဟာ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်ပျောက်သွားမှာ မလွဲ ဧကန်ပါဘဲ။
မြန်မာတိုင်းရင်းသူတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အခြေခံရှိစေရန် မိဘများ ၊ ဆရာတော်များနှင့် ဘာသာရေး အသင်းဖွဲ့များမှာ တာဝန်အရှိဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များက တိုင်းရင်းသူ တိုင်းရင်းသား တို့အား ကလေးဘဝ မှစတင်၍ သာသနာတော်အကြောင်း နားသွင်းပေးခြင်း၊နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်၌ ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်၍ တက်ရောက်ခိုင်းခြင်း၊ လူမျိုးခြားဘာသာခြားများနှင့် ရင်းရင်းနှီနှီး မဆက်ဆံရန် မထိမ်းမြားရန် ကြောင်းကျိုးညွှန်ပြဆုံးမခြင်း၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ထက်သန်မည့် သမိုင်း ကြောင်းများ ပြောပြခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုမဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်မှသာ နောင်မှနောင်တရ ကြသူများ မဖြစ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်များနှင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတို့ဟာ ဤအချက်ကို ဥာဏ် မျက်စိပွင့်လင်းဖို့လိုပါတယ်။ ကုလားတို့က‘ မြန်မာတိုင်းရင်းသူတစ်ယောက်ကိုရလျှင် သူတို့ ဘာသာ ရေး လူမျိုးရေးအတွက် စစ်သားငါးရာ ရသည်နှင့်တူသည် ‘ ဟု ဆိုထားပါတယ်။
အထက်ပါအချက်အလက်များကို ကြည့်၍ ကိုယ့်အမျိုးဘာသာမကွယ်ပျောက်ဖို့ အရေးမြန်မာ တိုင်းရင်းသားအပေါင်းတို့ စိတ်အေးမနေသင့်ကြပါဘူး။
at 21:25 20 comments
ကုလားဆိုးတို့က သူတို့ဈေးဆိုင်များတွင် (၇၈၆) ဟူသောသင်္ကေတ၊ လခြမ်း သင်္ကေတ များပြုလုပ် ထားတတ်ကြရာ ယင်းဆိုင်များမှာ ဈေးမဝယ်ဘဲ မြန်မာတိုင်းရင်းသားပိုင်ဆိုင်များမှာသာ ဈေးဝယ် သင့်ကြပါတယ်။ ကုလားဆိုးတို့ဆိုင်မှာဝယ်လျှင် အဆိပ်ပင်ရေလောင်းသည်နှင့် တူပါတယ်။
တစ်ခါက ကမ္ဘာကျော် မင်းကွန်းတိပိဋ္ဋကရေဆရာတော် ဘုရားကြီး၏တပည့်များ ကုလား ဆိုင်များမှာ အဆောက်အဦးပစ္စည်းများဝယ်ခဲ့ကြသဖြင့် ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ‘ ကုလားဆိုင်များက (၁)ကျပ်သာ အမြတ်တင်၍ မြန်မာတိုင်းရင်းသား ဆိုင်များ (၁၀)ကျပ်အထိ အမြတ်တင်ရင်တောင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားပိုင် ဆိုင်များမှာသာ ဝယ်သင့်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကုလားတို့မြတ်တဲ့ (၁)ကျပ် က အမျိုးဘာသာဖျက်ဆီးမဲ့(၁)ကျပ်ဖြစ်ပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့မြတ်တဲ့(၁၀)ကျပ်က ဘုရားတည် ကျောင်းဆောက်မှာဖြစ်လို့ပဲ ‘ လို့ မိန့်ကြားတော်မှုခဲ့ပါတယ်။ သြော်.. ကမ္ဘာကျော် ဆရာတော်ကြီးလည်း ကိုယ့်အမျိုး ကိုယ့်ဘာသာ အတွက် ရတတ်မအေးရှာပါတကား။
သို့သော်လည်း ကုန်မာဆိုင် ၊ အထည်ဆိုင် ၊စက်ပစ္စည်းဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊မျက်မှန်ဆိုင် စသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံး ယင်းတို့ပါးစပ်ထဲမှာ ဝါးမျိုခံထားကြရ၍ မြန်မာ ပိုင်ဆိုင်များ နည်းပါးလှသဖြင့် ကုလားတို့၏ ဆိုင်များမှာ ဈေးမဝယ်ရုံသာမက မြန်မာဆိုင်ပေါင်းများစွာ တည်ထောင် ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဖြစ်လျက်နဲ့ မြန်မာပိုင် ဆိုင်မရှိလို့ ကုလားဆိုင်မှာ ဝယ်လာ ရတာဟာလည်း ရင်နာစရာ မိမိတို့၏ ကြီးကျယ်သော ညံ့ဖျင်းချက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဤစာကိုဖတ်ရှုပြီး ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးပြသာနာများ၊မဖြစ်ပွားဘဲ ကိုယ့်အမျိုး ၊ကိုယ့်ဘာသာ မကွယ်ပျောက်အောင် ကိုယ့်အချင်းချင်း ၊စည်းရုံးခြင်း ၊ပညာပေးခြင်းတို့ဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံက ကြိုးစားသင့် ကြပါတယ်။ အကယ်၍များ မကြိုးစားဘဲ ခပ်ပေါ့ပေါ့ နေကြလျှင်ဖြင့် တစ်ချိန်က တစ်နိုင်ငံလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ခဲ့ကြသော အိန္ဒိယနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့လို လူပေါကြီး လို့ခေါ်တဲ့ မူဆလင်ကုလားဆိုးတို့၏ ဝါးမျိုခြင်းကို လှလှကြီး ခံကြရမှာ မလွဲပါဘူး။
ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး အန္တရာယ်ကောင်တွေ
ကျွန်တော်ဟာ မြန်မာ၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ကယား၊ ရခိုင် အစရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အပေါင်း တို့ဟာ အခြားသော နိုင်ငံများနည်းတူ အဓွန့်ရှည်ကြာစွာ တည်တန့်ပြီးတော့ ကမ္ဘာ့မြေပုံမှာ မြန်မာ့မြေပုံ အပြီးအပိုင် မကွယ်ပျောက်စေဖို့အတွက် ကျွန်တော် လေ့လာဖတ်ရှုမိသမျှ ရှာဖွေစုဆောင်းမိသမျှတို့ကို ညဏ်မီသမျှ အကျဉ်းရုံးပြီး ရိုးသားစွာ တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုတင်ပြရသည်မှာ ဘယ်လူမျိုး ဘယ်ဘာသာကိုမှ စော်ကားလိုစိတ်၊ မလိုမုန်းတီးစိတ် မရှိပဲ ယနေ့ ပစ္စုပ္ပုန် ကာလမှာ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ နေခဲ့ကြပါလျှင် တစ်နေ့ (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြေး၊မြစ်၊တီ၊ကျွတ် တို့လက်ထက် နောင်အနှစ် ၁၀၀ ၊ ၁၅၀ ဆိုလိုသလိုအတွင်းမှာ ) ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသား တွေဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံ အတွင်းမှာ ကိုယ်မျက်နှာငယ်ကြရပြီး ဘယ်တော့မှ ပြန်ပြီး နလန်မထူ နိုင်တော့ကြ တော့ဘဲ မထွေးလေးလို မြွေမျိုမခံရေး အတွက် အထူးတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ လေ့လာချက်ကို ဟုတ်မှာပဲလို့ဖတ်၍ ကောင်းရုံ အနေထားမျိုးမဟုတ်ဘဲ ယုတ္တိယုတာနဲ့ယှဉ်ပြီး တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြစေလိုပါတယ်။ နောက်ပြီးရဟန်းရှင်လူတို့ဟာ မိမိတို့ရဲ့ ကဏ္ဍအလိုက် သတိဝီရိယထားပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး နိုးကြားပြီး ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ကြစေလိုပါတယ်။ သတ္တဝါတွေဟာ မိမိကိုယ်မိမိ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှသာ အသက်ရှင်သန် နေထိုင်ကြ မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရားက အတ္တာ ဟ်ိ အတ္တာနော နာထော မိမိကိုယ်သာ မိမိကိုးကွယ်ရာလို့ ဟောကြားတော်မှုပါတယ်။ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြား တော်မှုခဲ့တဲ့ ဇာတ်နိပါတ်တော်တွေ ထဲမှာကြည့် လျှင် တိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာ နူးညံ့လှပနုနယ်တဲ့ သမင်တို့ပင်လျှင် မိမိတို့ရဲ့ သားငယ်သမီးတွေကို လူမုဆိုးတို့ရဲ့ဘေးရန်က လွတ်မြောက်စေရန် သမင်တို့ တတ်အပ်တဲ့ မာယာကို သင်ကြားပေးကြတာ ကို တွေ့ကြရပါတယ်။
သက်ရှိဖြစ်တဲ့လူတို့ တိရိစ္ဆာန်တို့မဆိုထားဘိ၊သက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ သစ်ပင်မန်းမာလာတို့ တောင်မှ ဥပမာ-နှင်းဆီ ပင်မှာရှိတဲ့ဆူးတို့ သဲကန္တာရမှာ ရှားရှားပါးပါးပေါက်တဲ့ ဇောင်းရှားပင်တို့၊ နှင်းမုန်တိုင်းထန် တဲ့ အရပ်မှာပေါက်တဲ့ ထင်းရှုးတို့ဟာလည်း သဘာဝ နဲ့သက်ရှိသတ္တဝါတို့ရဲ့ ဘေးဒဏ်မှ ကာကွယ်ရပ် တည်ပြီး အရွက်အနေအစား ပင်စည်အနေအထား ထူခြားစွာ ပေါက်ရောက်ကြပါတယ်။
အဲဒီတော့ စောစောက ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးဘာသာ သာသနာ မိမိတို့ရဲ့ မွေးရာဇာတိ နိုင်ငံမှာ မကွယ်ပစေဖို့အရေးကို ဆက်လက်ပြီး တင်ပြရပါလျှင် ယနေ့ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဟာ နယ်နမိတ်အားဖြင့် အနောက်မြောက်ဘက်မှ တရုတ်ပြည်၊ အရှေ့ဘက်မှ လောနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ဘက်မှ ယိုးဒယားပြည်၊ အနောက်တောင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၊ အနောက်ဖက်အိန္ဒိယ စသည်ဖြင့် နိုင်ငံ ငါးနိုင်ငံ နဲ့နယ်နမိတ်ချင်းဆက်စပ်လျက် ရှိပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာ သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝပြီး အစာရေစာပေါများပြီး အစာရေစာပေါများပေမယ့် လူဦးရေအားဖြင့်ရော လူသိပ်သည်း ထူထပ်မှုပါ ကုန်းခေါင်တော တောင် ထူထပ်တဲ့လောနိုင်ငံကလွှဲလျှင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ လူဦးရေ အနည်းဆုံးနဲ့ အကျဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ နယ်နမိတ်ချင်းဆက်စပ်နေတဲ့ တရုတ်ပြည်နဲ့ အိန္ဒိယပြည်တို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများတွေမှာ လူဦးရေပထမနဲ့ဒုတိယ လိုက်ပြီးတော့ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ (၄၀) ရာခိုင်နှူန်းနီးပါခန့်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘုရင်အနော်ရထာကစပြီး ကျန်စစ်သားစတဲ့ သာသနာပြုမင်း တွေ ၊ မင်းကြီးရန်နောင် ၊ မဟာမင်းခေါင် ၊ အနော်ရထာ၊ မဟာဗန္ဓုလ၊ မွန်သူရဲကောင်းသမိန်ဗရမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း အစရှိတဲ့စစ်သူကြီးတွေ၊ သူရဲကောင်းတွေ၊ ဝန်ကြီးပဒေသ ရာဇာ၊ ရာဇသင်္ကြန်၊ ဦးပေါ်ဦးအစရှိတဲ့ ပညာရှိအမတ်ကြီးတွေ၊ တောင်ဖီလာ ဆရာတော်၊ ဆရာတော်ဦးဗုဒ် အစရှိတဲ့ သာသနာ့အာဇာနည်ကြီးတွေ စသည်ဖြင့် ရေး၍ မကုန်နိုင်ဖွယ်ရာ မြောက်များလှစွာသော နှောင်းခေတ်က ကျေးဇူးရှင်ကြီး တွေရဲ့ လုံ့လဥဿာဟကြောင့်သာ ပထဝီအနေထားအရ အန္တရာယ် ရှိပေမယ့် ယနေ့တိုင်အောင် ရပ်တည်နေနိုင်ကြပြီး ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဟေ့ လို့ခေါ်ဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကုန်းဘောင်ခေတ် အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲမှာ မဟာဗန္ဓုလကျဆုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်မှစပြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းတို့ ကျဆုံးရတဲ့ အချိန်အထိ (၁၂၃) နှစ်တိုင်တိုင် မြန်မာ၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကချင်၊ စတဲ့ တိုင်းရင်း သား အာဇာနည်တို့သွေးမြေကျ တိုက်ပွဲဝင်ပြီး လွတ်လပ်ရေးကို ပြန်လည်ရယူခဲ့ကြပါတယ်။ အထက်ပါ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အာဇာနည်တွေနဲ့ မြောက်များလှစွာသော ဖော်မပြရသေး တဲ့မြန်မာ့ အာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တွေကသာ နှောင်းအတိတ်က ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု မပြုခဲ့ကြပါလျှင် ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပျောက်ကွယ်လု“ဖြစ်လျှင် လည်းဖြစ်နေပါမယ်။ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားသားတွေ ဘာသာခြားတွေကြားမှာ ကြားမှာ ကြွင်းကျန်ရစ် သူတို့ဟာမျက်နာငယ်ဘဝ ရောက် နေကြရမှာ အမှန်ပါဘဲ။
အဲဒီတော့ ယနေ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှိသူတိုင်းဟာ မည်သည့်ဆုလာဘ်ကိုမှ မမျှော်ကိုးဘဲ မိမိတို့ရဲ့ ရင်သွေးများဖြစ်ကြတဲ့ သားစဉ်မြေးဆက်တို့အတွက် မိမိတို့လက်လှမ်းမီသမျှ ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းသင့်ကြပါတယ်။
ယနေ့ပစ္စုပ္ပန်ခေတ်မှာ ကာကွယ်ကြမှသာ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှ မြန်မာ့မြေ ပုံမပျောက်မှာကို အထူး ဂရုပြု သင့်ကြပါတယ်။
အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘယ်လိုအန္တရာယ်ဘယ်လိုအကြောင်းရင်းနဲ့ ပျောက်ကွယ် နိုင်ဖို့ အလားအလာရှိမလဲလို့ ညဏ်မီသရွေ့သတ္တုချပြီး ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။
ပထမအားဖြင့် လူဦးရေများပြားလှတဲ့ အိမ်နီးချင်း (၃)နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ (၁) တရုတ် ၊ (၂) ဟိန္ဒူ အိန္ဒိယ ၊ (၃) အစ္စလာမ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (၃)နိုင်ငံမှ လူတွေဟာ ရှေးရှေးခေတ်များကလို ရေကြည်ရာ မျက်နုရာဆိုသလို အရပ်တွေကို လူလုံးလိုက်လှိမ့်ပြီးတော့ အဓမ္မနည်းနဲ့ ဝင်လာပြန်ပြီဆိုပါက တိုင်းရင်း မြန်မာနွယ်ဖွားတို့ဟာ ကွယ်ပျောက်မြုပ်ကွယ်သွားရန် ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်ကြရတာ ကတော့ ဥပစ္ဆေဒကကံဖြတ်လို့ ရုတ်တရက် သေဆုံးရသလိုပါပဲ။
ဒါပေမယ့်ခေတ်မီတိုးတက်လာတဲ့ (၂၀)ရာစု နောက်ပိုင်းမှာ အထူးသဖြင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး အပြီးမှာဒီလို မဟားဒယားနည်းနဲ့ဖြစ်စေ၊ အဓမ္မနည်းနှင်ြ့ဖစ်စေ၊ မတရားပြုကျင့်ဖို့ကို လုံးဝမလွယ်သ လောက်ပါဘဲ။ တိတိကျကျတင်ပြရပါလျှင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သာဓက တစ်ခုတော့ရှိ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး အပြီး တရုတ်ပြည်ကြီးကို ချန်ကေရှိတ်ထဲမှ မော်စီတုန်း ကွန်မြူနစ်တို့ သိမ်းပိုက်ကြပြီး နောက်ပိုင်းမှာ တိဘက်ပြည်ကို သူတို့တရုတ်ပြည်က ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုပြီး မတရားသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း ပဲတိဗက်လူမျိုး (၃)သန်းခန့်ရှိသည့် နေရာမှာတရုတ် (၈) သန်းကို နေရာချထားပါတယ်။ တိဗက်လူမျိုး တွေကို ဝါးမျိုပစ်တဲ့ သဘောပါပဲ။ တရုတ်ပြည်က ကမ္ဘာမှာ လူဦးရေအများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ထိုအခါက သန်းပေါင်း (၇၀၀) ခန့်ကလည်းရှိ အဲဒီအချိန်မှာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ အရှိန်အဝါကလည်း အလွန်ကောင်း နေတော့ ကမ္ဘာက ငြိမ်နေလိုက်ကြပါတယ်။
၁၆-၁၇-၁၈ ရာစုနှစ်များမှာတော့ နှောင်းအတိတ်ကဥရောပ ကိုလိုနီများဖြစ်ကြတဲ့ အင်္ဂလိပ်၊ စပိန် ၊ပေါ်တူဂီ၊ပြင်သစ်ဒတ်ခ်ျတို့က တောင်/မြောက်အမေရိက ၁/၂ တို့နဲ့ သြစတြီးရီးယား တို့ကို နယ်ချဲ့ပြီး အဲဒီဒေသများမှာ တိုင်းရင်းသားလူနီတွေ၊ အင်းကောတွေနဲ့သြစတြီးရီးယားက အဘော်ရီဂျင်းတွေကို မျိုးဖြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သြစတြီးရီးယားတိုက်နားက ဘက်(စ်)မေးနီးယားကျွန်းဆိုလျှင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတို့ လုံးဝ မျိုးဖြုတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စောစောက တင်ပြခဲ့သလို (၂၀)ရာစု နောက်ပိုင်းမှာအဲဒီလို အနိုင်ကျင့်မှုတွေဟာ တော်တော့ကို ပပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ အခြားတစ်နည်း အားဖြင့် သတိပြုသင့်တာ စဉ်းစားကြည့်ကြပြီး ကြောက်ဖို့ကောင်းတာက အိမ်နီးချင်း( ၅)နိုင်ငံ အနက်(၁)တရုတ်(၂)ဟိန္ဒူအိန္ဒိယ၊(၃)ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစ္စလာမ်ခေါ်တောတို့ဟာ တစိမ့်စိမ့်ဝင်လို့ဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သူတို့က တစိမ့်စိမ့်သွေးနှောပြီးဝါးမျိုလို့ဖြစ်စေ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ ပျောက်ကွယ် ကြမယ့် အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိလူဦးရေသန်း (၄၀) ကျော်ရှိသည့်အနက် တရုတ်၊ ဟိန္ဒူကုလားဦးရေ နှစ်ရပ်ပေါင်းသည် တစ်သန်းပတ်ဝန်းကျင်ထက် မပိုသောကြောင့် လောလောဆယ်သူတို့ရဲ့ လက်ရှိ အင်အားကို ကြောက်ရာမရှိပါဘူး။
မဟာယာနနွယ်ဝင် တရုတ်နဲ့ဟိန္ဒူကုလားတို့ဟာ တိုင်းရင်းသားသူတို့နဲ့ ပေါင်းဖော် လက်ထပ်ကြလျှင်လည်း မျိုးဆက်၂ ဆက်၊ ၃ဆက် လောက်မှာ ၊ ပင်မဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားများ (ဒေသခံများ)နဲ့ ရောနှောသွား တတ်ကြပါတယ် ။ အေးချမ်းစွာ လက်တွဲ နေထိုင်ကြပြီး ထင်ရှားလောက်တဲ့ ပဋ္ဋိပက္ခတွေလည်း မရှိခဲ့ကြ ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှခေါ်တဲ့ ခေါ်တောနိုင်ငံ အစ္စလာမ်ကုလားဆိုးတို့ရဲ့ဝါးမျိုခံရမယ့် ဘေး အန္တရာယ်ကတော့ အမှန်တကယ်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလို တစိမ့်စိမ့် မသိလိုက်မသိဘာသာ ဝါးမျိုခံ ရတာ ကတော့ သောက်ရေအိုးအောက်ကခံတဲ့ ကရွတ်ခွေဆွေး သလိုပါပဲ။ သူတို့ရဲ့အန္တရာယ်ကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံလို သန်း(၄၅)သန်းခန့်သာရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ငယ်ကို မပြောနဲ့ ယနေ့ စက်မှုလက်မှုထွန်းကားပြီး မော်တော်ကား ၊ လေယဉ်ပျံတွေနဲ့ အာကာသကိုတောင် ဂြိုလ်တု လွတ်တင်နေတဲ့ သန်းပေါင်း (၈၀၀) ခန့်ရှိတဲ့ အိန္ဒ်ိယနိုင်ငံကတောင် အတော့် ကိုလန့်နေရှာတယ်။ လန့်ဆိုဟိန္ဒိုဘာသာ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသား တို့ဟာ နှောင်းအတိတ်က ခဲမှန်ဘူးတဲ့ စာသူငယ်လိုရာဇဝင် တစ်လျှောက်မှာ မူဆလင် ဘုရင်တို့ရဲ့ အနုနည်း အကြမ်းနည်း နည်းပေါင်းစုံတို့နဲ့အဓမ္မ တစ်စတစ်စ နယ်ချဲ့ခံခဲ့ရတဲ့အပြင် အင်္ဂလိပ်တို့ထဲမှ အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးရယူတော့ မူဆလင်များတဲ့ အရပ်တွေကို သီးခြားနိုင်ငံ အနေနဲ့ ဖဲ့ပေးခဲ့ရပါတယ်။
ဒါတောင်ယနေ့အိန္ဒိယပြည်ထဲမှာ မူဆလင်(၁၀) ကုဋ္ဋေ(သန်းပေါင်း၁၀၀)ရှိ နေပါသေးတယ်။ (ရှမ်းပြည်၆၀၀၀၀စတုရန်းမိုင်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၅၄၅၀၀စတုရန်းမိုင်ရှိ၍) ရှမ်းပြည်နယ်လောက် အ ကျယ် အဝန်းထက်ငယ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ မူဆလင်ခေါ်တော သန်း(၉၀)ခန့် မဆန့်မပြဲရှိနေပြီး အိန္ဒိယပိုင် အာသံပြည်ထဲကို တစိမ့်စိမ့် ဝင်ပြီး (လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်အတွင်း မှာပင် ခေါ်တော ၃ သန်းကျော်တို့ခိုးဝင်ခဲ့ကြပြီး) မသိမသာ အခြေချခဲ့ရာမှ ယနေ့ အာသံပြည်နယ်သား (၂၅)ရာခိုင်နှူန်း ခန့်ဟာ ခေါ်တောနဲ့ ခေါ်တောအအနွယ်တို့ဖြစ်နေကြ ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုမှပြည်နယ်သားတွေက မခံရပ်နိုင်ဖြစ်လို့၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းကြောင့်လူ ၃-၄ထောင်ခန့် သေဆုံးခဲ့ကြရပါ တယ်။ အိန္ဒိယပါလီမန်မှာလည်း-ဥပဒေသစ်တစ်ရပ်ပြဌာန်းပြီး အိန္ဒိယ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်တစ်လျှောက် မိုင် (၂၅၀၀) ကျော်မှာ တပ်စခန်းတွေ ညမီးမောင်းတွေ၊ ခေတ်မီကိရိယာတွေ၊ အစောင့်တပ်သားတွေနဲ့ မတရားခိုးဝင်သူများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လို့ ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ ဘဏ္ဍာတော်ငွေကုဋ္ဋေချီပြီး အကုန်ကျ ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို လေ့လာကြည့်ရှု့ခြင်းအားဖြင့် ဒီပြသာနာကို အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ အတော့်ကို စိုးရိမ်ပူပန်နေကြောင်း ထင်ရှားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကုလားတို့ရဲ့ အယူဝါဒဖြစ်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် ပတ်သက် လို့ အောက်ပါမေးခွန်းတွေကိုမေးသင့်ပါတယ်။
၁။ ဥရောပတိုက်ရှိ ခရစ်ယာန်နိုင်ငံအသီးသီးတို့ဟာ ၁၂ ရာစုလောက်က ဘာကြောင့်ထိတ်ထိတ်ပြာ ပြာဖြစ်ပြီး ကရူးဆိတ်ခေါ်တဲ့ တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ မူဆလင်စစ်တပ်တွေကို သွေးချောင်းစီး တမျှ ခုခံ ကာကွယ်ခဲ့ကြသလဲ။
၂။ သန်းပေါင်း ၇၀၀ ကျော်ရှိပြီးကမ္ဘာမှာ လူဦးရေဒုတိယအများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဘာကြောင့် ခဲမှန်ဘူးတဲ့ စာသူငယ်လို အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ ပတ်သက်လာလျှင် လန့်နေရပါသလဲ။
၃။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဟိန္ဒူအမျိုးသမီးတွေ ဘာကြောင့်အိမ်တွင်းပုန်းစနစ်ကျင့်သုံးနေရသလဲ။
၄။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဘာကြောင့် အုရဒူခေါ်တဲ့ ဘာသာစကားပေါ်ပေါက်လာရသလဲ။
၅။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ ၉-တိုင်း၊ ၉-ဌာနသို့ သာသနာပြုစေလွတ်တော်မှုခဲ့တဲ့ သီရိဓမ္မာသောက မင်းတရားကြီး မဇ္စိုမဒေသမှာ ပြုစုထူထောင်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနဲ့အတူ ဗုဒ္ဓရဟန်းတော်တွေ ဘာကြောင့် အပြီးအပိုင်ချုပ်ငြိမ်း ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ရပါသလဲ။
၆။ ကျွန်းစုပေါင်း ၃၀၀၀ကျော်ရှိတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ဖိလစ်ပိုင် အစရှိတဲ့ ဒေသကြီး တစ်ခု လုံးမှ သန်းပေါင်းများစွာသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဘာကြောင့်ချုပ်ငြိမ်း ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ ရသလဲ၊ စသည်ဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါမေးခွန်းများအပြင် အခြားမေးသင့်တဲ့မေးခွန်းတွေအများအပြား ရှိပါတယ်။
အထက်ပါမေးခွန်းတွေကို ဖြေဆိုဖို့အတွက်နဲ့ အမျိုးပျောက်မည်ကို စိုးကြောက်ဖို့အတွက် အောက်ပါ အချက်အလက်တို့ကို စနစ်တကျလေ့လာသင့်ကြပါတယ်။
၁။ အစ္စလာမ်ဘာသာစတင်၍ ပေါ်ပေါက်လာပုံ
၂။ ရှေးကပါးရှား(ယခုအီရန်)နိုင်ငံမှ ဇော်ရိုးစကားဘာသာဝင်များ ချုပ်ငြိမ်းကွယ်ပျောက်ရပုံ။
၃။ ဥရောပသို့မွတ်ဆလင်စစ်တပ် မားဘာသာရေးနယ်ချဲ့တိုက်ခိုက်ကြပုံ။
၄။ အိန္ဒိယတိုက်ငယ်သို့ အာရပ်၊အာဖဂန်၊ မဂို မူဆလင်ဘုရင်များ စစ်ချီ၍အဓမ္မသသာသနာ ပြုကြပုံ။
၅။ ကျွန်းစုပေါင်း ၃၀၀၀ကျော်ရှိတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား သီရိဝိဇယ အင်ပါယာကြီးနဲ့တကွ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်များ နှစ်ပေါင်း ၁၈၀၀ခန့်ထွန်းကားခဲ့ပြီးမှ ကွယ်ပရပုံ(အေဒီ၃ရာစုမှ၊အေဒီ၁၅ရာစုအထိ)
၇။ တရုတ်ပြည်၊မွန်ဂိုလီးယားပြည်၊ဂျပန်၊ကိုရီးယားစသော အရှေ့ဖျားနိုင်ငံများနှင့် အစ္စလာမ်
၈။ ယနေ့ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ အစ္စလာမ်နဲ့မူဆလင်နိုင်ငံများ၏ အခြေအနေ။
စသည်တို့ကိုလေ့လာကြည့်မှသာ သဘောပေါက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းသို့ သဘောပေါက် ပါမှ မူဆလင်ကုလားတို့ဟာ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး အန္တရာယ်ကောင်တွေ ဆိုတာသိလာပါ လိမ့်မယ်။
at 21:23 14 comments
(၇၈၆) ကို ရှောင်စေလို
ဒီစာအုပ်လာသမိုင်းကြောင်းများ မသိကြသော တိုင်းရင်းသားတို့ ကုလာဆိုင်များတွင် ဈေး ဝယ်တာကို အပြစ်မဆိုသာသော်လည်း ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်လို့အမည်ခံနေကြသောကိုရင်များ နှင့် ရဟန်းတော်များ ကုလားဆိုင်များတွင် ဈေးဝယ်နေကြတာကို နေ့စဉ်တွေ့မြင်နေကြရ၍ ဘာသာရေး ဗဟုသုတနည်းပါးပြီး မျုိးချစ်စိတ် သာသနာစိတ် ခေါင်းပါးကြသော ဤအရှင်များကို ကြည့်၍ ကိုယ့်အမျိုး ကိုယ့်ဘာသာအတွက်ရင်မအေးစရာဖြစ်ရပါ၏။ ရှင်ရဟန်းတို့သည် သူတို့ဆိုင်များတွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ် ကျ ဈေးမဝယ်ကြရုံ မက မသိ နားမလည်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားများ ဈေးဝယ်တာ ကိုမြင်ရင် တောင် နားလည်အောင် ရှင်းပြတာ မြစ်သင့်ပေသည်။ ခေါင်မှစ၍မိုးမ လုံကြလျှင်ဖြင့် အမြန်ဆုံး အမျိုးဘာသာ ကွယ်ပျောက်သွားနိုင်သည်ကို သတိပြူပါ။
ယခုအခါ ကုလားဆိုးတို့သည် (၇၈၆) ရေးထားလျှင် တိုင်းရင်းသားတို့ ဈေးမဝယ်ကြမှန်း သိ၍ ယင်း(၇၈၆)ကို ဖြုတ်၍ဖြစ်စေ။ (<^7) ဟူသော ဏန်းအသစ်ထွင်၍ဖြစ်စေ ဈေးရောင်းနေကြဖြင့် ကုလားဆိုင် မဟုတ်မှန်း သေချာစွာလေ့လာပြီးမှ သာ ဈေးဝယ်သင့်ကြပေသည်။
at 21:21 11 comments
မိုဟာမက်ရဲ့ အစ္စလာမ်တရားများကို စတင်လက်ခံ ယုံကြည်သူတို့မှာ သူရဲ့မယားကြီး ခတိဂျာ၊ မွေးစားသားအလိ၊ မိတ်ဆွေ အဘူတရ် ၊ ဒိပ်လို့ခေါ်တဲ့ကျေးကျွန်အားဖြင့် (၄)ဦးသာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
တမန်တော်မိုဟာမက်ဟာ ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူပြီး နှစ်ပေါင်း ၁၂၀၀ကျော်ခန့် အကြာ ရဟူဒိဘာသာ ပေါ်ပေါက်ပြီး နှစ် ၁၀၀၀ ကျော်ခန့် အကြာ ခရစ်ယာန်ပေါ်ပေါက်ပြီး နှစ် ၆၀၀ ခန့်အကြာမှာမှ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ ပါတယ်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များက တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်(၅၀)ဝတ်ပြုကြရန် အမိန့်ချမှတ်ပေးပါတယ်။ သို့သော် တဖြည်ဖြည်းလျော့ကျလာရာ တစ်နေ့(၅)ကြိမ် ကျဝတ်ပြုရန် လျော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။
မူဆလင်တွေက သူတို့ဟာရုပ်တုကိုရှိမခိုးဘူးလို့ အခြားဘာသာဝင်များအပေါ်မှာ ဂုဏ်ယူ ဝင့်ကြားတတ်ကြသော်လည်း သူတို့အားလုံးဟာ မက္ကာမှာရှိတဲ့ ကျောက်တုံးရှိရာ အရပ်ကို မျက်နှာမူပြီး ဦးချနေကြတာကို တော့သူတို့ကိုယ်သူတို့သဘာဝကျ/မကျဆန်းစစ်ကြည့်မိကြရဲ့လားမသိပါဘူး။
အဲဒီတော့ မူဆလင်တွေဟာ သူတို့ဘာသာပြန်ပွားရေးအတွက် သူမတူအောင်နည်း အမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးစားကြရာမှာ ချီးကျူးဖို့ကောင်းပါတယ်။ စစ်ရေးအရ အောင်နိုင်လို့နှိပ်ကွပ်ပြီး သိမ်းသွင်းသလို စစ်ရေးရှုံးနိမ့် ပြန်တော့လည်း အောက်ကနေ့လျှိုပြီး ပြန်သိမ်းသွင်းပြန်တာပဲ။ တန်းတူရည်တူ စီးပွားရေး အရ ရောက်ရာအရပ်တွေမှာအဖိုရာ အမကပါသိမ်း သွင်းကြပြန်ပါတယ်။ အထက်ကရော အောက်ကရော ဘေးတိုက်ရော မလွတ်တမ်း စည်းရုံးကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရခိုင်မေဃဝတီ ဆရာတော် ဦးနာရာဒက သူတို့ကို ယူသန္တရာတွေလို့ သမုတ်ပါတယ်။ စပါးမြွေကြီးဟာ သားကောင်ကို ၎င်းရဲ့ စက်ကွင်းထဲ ဝင်လာလျှင် မလွတ်တမ်းမြိုပစ် တတ်လို့ စပါးကြီးမြွေတွေလို့လည်း သမုတ်ပါတယ်။
ဟဂျရီ သက္ကရာဇ်(၂)တွင် ဖြစ်ပွားသော အူဟုဒ်စစ်ပွဲ၌ တစ်ဖက်မှ ခဲကျိုးထိမှန်၍ တမန်တော်၏ သွားတစ်ချောင်းကျိုးသွားခဲ့တယ်။ ယင်းစစ်ပွဲတွင် တစ်ဖက်မှ နာကျည်းစွာ ရွပ်ရွပ်ချွန်ချွန် တိုက်ခိုက်သည့် အလျောက် တမန်တော်အား မြားမထိရန်လက်ဖြင့် ကာကွယ်ပေးခဲ့သော ဟဇရသ်ဘွလ်ဟာ၏ လက်များ မြားထိ၍ နှစ်ဖက်စလုံး ဖြတ်ပစ်လိုက်ရပါတယ်။ နောက်စစ်ပွဲများတွင် ရွပ်ရွပ်ချွန်ချွန် ပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့သော ဒါလ်ဒ်ဗင်ဝါလိဒ် ဆိုသူအား “အလ္လာ၏ဓါး“ ဟု ဘွဲ့ချီးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ (ဒီနေရာ၌မြင့်မြတ်လှသည်ဟုဆိုသော အလ္လာကောင်းကင်ဘုရားနှင့် လူသတ်သမား လက်နက်ဘယ်လိုဆက်စပ်သလဲလို့တွေးတောစရာပင်။)
အရ တလပ်(ဘ) သုံးကြိမ်ခေါ်ရုံမျှဖြင့် မိမိမယားအား ကွားရှင်းခွင့်ပြုထားခြင်း။
ရှင်ရဟန်းမှာ ၊ ပြုပြင်ပါ
လူတို့ဘက်က စိတ်ဓာတ်များ ပြင်သင့်သလို ရဟန်းတော်တို့ဘက်ကလည်း ပြင်သင့်ပါ၏။ မြို့ရွာတိုင်းတွင် သြဇာအာဏာရှိသော ဆရာတော်တို့သည် ဘာသာတူသော ရဟန်းတော်ခြင်း တုိုက် ခိုက်ခြင်း၊ အပြစ်ပြောခြင်း၊ ရာထူးလုခြင်း စသည်ဖြင့် မလုပ်သင့်တာများလုပ်နေကြ၍ ညီညွတ်မှု ပျက်ပြားစေသဖြင့် အဘယ်မှာလူမျိုးခြား၊ဘာသာခြားတို့ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်မည်နည်း။ သုဓမ္မာ၊ ရွှေကျင် စသည့်ဂိုဏ်းစွဲမထားဘဲ ဘာသာသာသနာ၏ အန္တရာယ်ကို စုပေါင်းကာကွယ်သင့်ပါ၏။ ယခုအခါ ဂိုဏ်းစွဲ၊ဒေသစွဲ၊ဆရာစွဲ၊တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတို့ခွဲကာနေကြ၍ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအနီးကပ်ဆုံး မူဆလင်ကုလား အန္တရာယ်ကိုမေ့နေကြပေသည်။ ဒီလိုမေ့နေကြလျှင် ကျောချမှ ဓားပြမှန်းသိကြမည်ဖြစ် သည်။
ညီညွတ်မှုပွား ၊ တို့မျိုးသား
လူမျိုးတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းတွင် မညီညွှတ်လျှင် မြန်မြန်ပျက်စီးတတ်ပါ၏။ မြန်မာတိုင်းရင်းသား တို့သည် လူမျိုးခြားတို့အပေါ် ခင်မင်ဖော်ရွေတတ်သော်လည်း ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းအား ကူညီမှု နည်းပါးရုံမျှမက ညီအစ်ကိုမောင်နှမချင်း ကြီးပွားသည်ကိုပင် မနာလိုဝန်တိုဖြစ်၍ တိုက်ခိုက်တတ်ကြ၏။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်းသည် လူမျိုးခြားဘာသာခြားတို့ စိတ်ကြိုက်သွေးခွဲပြီး ဝါးမျိုနိုင်ကြသဖြင့် ဤစိတ် ဓာတ်များကို ဖျောက်ပစ်ရန် အချိန်တန်ပြီဖြစ်၏။ လူမျိုးခြားတို့ ဝါးမျိုရန်ကြိုးစားလျှင်လည်း မျိုးချစ်စိတ် ဓာတ်ဖြင့် စုပေါင်း ကာကွယ်သင့်ပါ၏။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း တစ်ယောက်အားဖြင့်မနိုင်လျှင် စုပေါင်းလုပ်ဆောင်လုပ် သင့်ပါ ၏။ ယင်းသို့မလုပ်ဆောင်လျှင် စီးပွားရေးလုပ် ကွက်များကိုလည်း ဝါးမျိုခံရနိုင်ပေသည်။ ယင်းသို့ မလုပ်ဆောင်သဖြင့် ဝါးမျိုခံရပုံကို ပြရလျှင် မေမြို့နှင့် ကျိုက်မရော လိုင်းကား အသင်းများကို လက်ညှိုး ထုိးပြရမည်ဖြစ်၏။ တစ်ချိန်က ယင်းမြို့များတွင် တိုင်းရင်းသားတို့သာ ကားလိုင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ သော်လည်းယခုအခါ မူဆလင်တို့ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားကြပေပြီ။ တိုင်းရင်းသားတို့ လိုင်းကားများ ကားလိုင်းအတွက် ငွေကြေးမပြည့်စုံသဖြင့် ချောင်ထဲရောက် နေကြပေသည်။
My dear Guest !
If you can't read this Blog, you need to install Zawgyi-One font in your Computer. And to install Myanmar Font, please click the under following Link.
Zawgyi-One Font (Click Here)